Saad Hariirii: Faransaay akka daawwatu affeerte malee 'godaansa miti' - BBC News Afaan Oromoo
Saad Hariirii: Faransaay akka daawwatu affeerte malee 'godaansa miti'
Goodayyaa suuraa Poostaroonni suuraa Saad Hariirii qaban magaalaa guddittii Beeyruut keessa
Prezidantiin Faransaay Imaanu'el Maakroon, Ministira Muummee Lebaanon Saad Hariirii fi maatii isaanii gara Faransaay akka dhufan affeeraniiru. Haatahu malee baqattummaa siyaasaa dhiheessaa akka hin jirres ibsan.
Qondaaltonni Faransaay Obbo Hariiriin ''guyyoota dhufanitti'' gara biyyattii galu jedhan.
Obbo Hariiriin haala hin eegamneen, ALA gaafa Sadaasa 04 wayita daawwanaa Saawudii Arabiyaa irra turanitti aangoo gadhiisuun isaanii, jeequmsa siyaasaa uumeera.
Mootummaan Saawudii Obbo Hariirii fedhii isaanii malee qabaa akka hinjirre akkasumas aangoo akka gadhiisuuf dhiibbaa irratti akka hin taasisne haalteetti.
Gaafa Roobii, Pirezidantiin Lebaanoon Misheel Awoon, Saawudiin Obbo Hariirii to'annaa jala oolchaa akka jirtu himatan.
Haa ta'u malee, Obbo Hariiriin nagaya akka ta'aniifi yeroo dhihoottis gara Lebaanoon akka deebi'an irra deddeebiin himaniiru.
Obbo Maakroon haasaa Jarmaniitti taasisaniin, affeerraan ''guyyoota muraasaa'' kun kan taasifame erga isaan Obbo Hariirii fi Dhaalaa Goonfoo Mootii Saawudii Mohaammad bin Saalmaan bilbilaan haasoofsiisaniin booda akka ta'e dubbataniiru.
Goodayyaa suuraa Erga Hariiriin aangoo gadhiisanii booda Lebaanoonitti sodaan cimeera
Obbo Hariiriif baqattummaa mijeessaa akka jiran gaafatamanii: ''Lakkii, gonkumaa. Lebaanon akka tasgabbbooftu hawwii kooti,'' jechuun deebisaniiru.
Itti dabaluunis: ''Lebaanoon cimtuu fi kabajamte arguu barbaanna. Hooggantoonni ishees bilisaan kan murtee dabarsaniifi walabummaan dubbatan barbaanna.''
Haalli ammaa kunis kan ta'e wayita Ministirri Hajaa Alaa Faransaay Yives la Diriyaan waa'eedhuma jeequmsa kanaa haasa'uuf Saawudii daawwatanitti.
Preezidant Awoon ergaa Twiitar irratti maxxansaniin, akka yaada Lebanooniitti Obbo Hariiriin haala mirga namoomaa iusaanii sarbuun ''qabamanii, to'annoo jala oolfamaniiru''
''Murteen kamiyyuu aangoo gadhiisuu biyya alaarraa godhameen hin dabru,'' jedhan. Itti ida'uunis, ''Gara Lebaanoon deebi'uun xalayaa hojii gadhiisuusaa galchuu qaba, yookaan yaada jijjiirrachuu qaba. Yookaas sababootaa fi furmaata isaa mari'achuu qabna.''
Goodayyaa suuraa Saad Hariirii fi Imaanu'el Maakroon Fulbaana dabre Paarisitti haasa'anii turan
Deebii kennuuf Obbo Hariiriin waan tiwiit godhan: ''Ammallee irra deddeebi'uun kanan jechuu barbaadu, akka malee nagayan qaba. Yoo Rabbii jedhe ammoo gara biyya koo jaalatamtuu Lebaanonitti nin deebi'a.''
Obbo Hariiriin aangoo gadhiisuu kan beeksisan, magaalaa guddittii Saawudii, Riyaad irraa hasawa televiziyoona irratti taasisaniini. Sababni isaanis, sodaa ajjeechaa waa qabaniif akka tahes himan.
Iraanis naannichati ''waldhabdee, balaa fi badiisa'' facaasti jechuunis himatan.
Abbaan Hariirii, Raafik, Ministira Muummee Lebaanoon duraanii turan. Isaanis wayita dhukaasa boombii ALA 2005 Beeyruut ajjeefaman.